Mashruuca Eskişehir Gar wuxuu noqon doonaa mid niyad jabsan | RayHaber | raillynews
HometareenkaMashruuca Eskisehir Gar ayaa niyad jabaya
22 / 01 / 2014 tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
Mashruuca Eskisehir Gar ayaa niyadjabaya: Shaki kuma jiro mashruuca cusub ee gar-naqnimada, taas oo ah arrin dood ah in la dhisi doono ama aan la dhisi doonin muddo dheer, waxay kordhisay calaamadda DDY. Sawirada meelo badan oo magaalada ka mid ah, waxay ku wareertay in sawirada muraayadaha tareenka xawaaraha sare leh ee Eskisehir lagu soo daray.
HADDII AAD RAADINAYO
Dhismaha Tareenka Xawaaraha Sare, oo ah mid ka mid ah mashaariicda muhiimka ah ee xukuumadda, ayaa sii socota, halka fikradda dib-u-dhiska dhismayaasha tareenka ee magaalooyinka halkaas oo tareenka xawaaraha sare uu sii wadi doono.
Xaqiiqda ah in aan tallaabo cad loo qaadin taariikhda arrintan, kaas oo sannado badan looga hadlay Eskisehir, magaalada, oo ah tareenka xawaaraha sare leh, wuxuu kor u qaadaa welwelka.
Siyaasiyiin arrimahan ku saabsan ayaa si joogta ah u yimid doodaha. Wadahadalladii adagaa ee ku saabsan meesha xarunteeda cusubi ay ku jiri doonto hannaanka soo hartay ayaa dib u dhigtay tallaabooyin la taaban karo oo la qaadayo. Saraakiisha dawladda hoose ayaa sheegay in xaruntan cusub lagu dhisi doono saldhigga sonkorta, iyada oo saraakiisha dawladda ay ku adkeysanayaan in xarunta cusub lagu dhisi doono degmada Enveriye, oo ka tirsan TCDD.
MUUQAALKA LAGU HELO ESKİŞEHIR
Dhinaca kale, iyadoo la sheeganayo in saldhigga cusub ee lagu dhisi doono Eskisehir, aragti ayaa si joogta ah looga dhex abuuray aragtida dadweynaha waxayna sheeganeysaa in mashruuca codsiga la sameyn doono waa sawirka. Hotelka 5 hotel, makhaayado, waxyaabo badan oo bulshadeed, oo ay ku jiraan saldhigga cusub, oo ay ku jiraan saldhigga dhulka hoostiisa ayaa ka mid ah sheegashooyinka, laakiin habka dhamaan sheegashooyinkan waxaa lagu beddelay sugitaan dagan.
MAS'UULKA LOOGU TALAGALAY DOWLADDA SOOMAALIYA
Xaqiiqdii ma jirin horumar ku saabsan mawduuca wakhtiga ku meel gaarka ah ee keenay maskaxda Eskisehir "Waa maxay xarunteena?" Su'aalaha badanaa. Nidaamkan, magaaladu waxay u timid magaalada shirwaynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo la kulmay shaqaale ka tirsan golaha magaalada Eskisehir ayaa waydiistay qaddiyadda mashruuca, ka dibna "Uma baahna in wax laga qabto mashruucaan hadda, dhismaha goobaha, hubinta socodka dhididka degdegga ah," ayuu yiri hadalo badan.
Ka dib markii wararkan ay si weyn ugu wareegeen magaalada, filashadii joogtada ahayd waxa loo beddelay rajo xiiso leh oo leh fikradda ah in hindisaha mashruuca la qaban doono.
DALKA WAXYAABAHA LAGA HELAYAA WASIIR
Si kastaba ha ahaatee, aragtiyihii dhowaan soo gudbiyay Guddiga Wadaxaajoodka (FDI) meelo badan oo magaalada ka mid ah oo loo soo bandhigay "mashruuca Isgaadhsiinta Sare ee Eskisehir herkes, jahwareerka sawirada oo xaqiijiyay in ra'iisal wasaaraha uu qof walba ku wareersan yahay. Mashruucan ayaa si rasmi ah u muujinaya tareenka xawaaraha sare ee Eskisehir oo ku yaal meelihii ay ku yaalaan meelihii loo yaqaan 'platforms', oo ay ku jiraan nolosha dhabta ah, oo ay ku jiraan boodhadhka, saqafka, rakaabka iyo waxyaabo kale oo ka mid ah mashruuca "Gaarayaa niyadjab baa?" Dad badan oo Eskişehir ah oo arkay sawirkii Eskisehir ee YHT; "Sida muuqata mashruuc cusub xaruntan cusub waa guga" ".
WAXYAABAHA LOO BAAHAN YAHAY MASUULIYADAHA
Sugitaanka walaaca, oo beddelaya sugitaanka farxada leh ka dib sawirada ay wadaagaan FDI, ayaa dadka deggan Eskisehir deggan. Eskisehirliyi waxay ka walaacsan tahay horumarka la xidhiidha mashruuca cusub ee saldhigga, oo hore loogu sheegay inuu yahay mashruuca hindisaha; "Waxaan rajeynaynaa in xaruntan cusub la xasuusto. Goobta iyo isku xirka jidadka tareenada ma dareemayaan
Sababta Maxuu Tareenka Eskişehir iyo Mashruuca Ka-Hortagga Wadooyinka Tareenka uusan ku dhaafeynin TCDD
Dhismayaasha Tareenka Sare
YHTden ka filitaanka dalxiiska
ADARAY Duulimaadyadu waxay bilaabi doonaan waqti gaaban